Hirshabelle oo ka digtay bannaanbaxyada Degmada Buulo Barde | Universal Somali TV
Hirshabelle oo ka digtay bannaanbaxyada Degmada Buulo Barde
Maamulka Hirshabelle ayaa dadka ku dhaqan Degmada Buulo Barde ee Gobolka Hiiraan kaga digay inay qabtaan bannaanbaxyo liddi ku ah maamulka.
Madaxweynaha Hirshabelle iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa tan iyo toddobaadkii hore ku sugan Degmada Buulo Barde, iyagoona u joogga arrimo ku aadan soo afjaridda khilaafka ka dhashay is bedelka lagu sameeyay Gudoomiyihii hore ee Degmada, oo mid cusub lagu soo bedelay.
Geelle Isaaq Warsame, Wasiir Kuxigeenka Amniga ee Hirshabelle oo Warbaahinta la hadlay ayaa marka hore sheegay inay si diiran u soo dhaweeyeen dadka reer Buulo Barde, iyadoona uu ku ammaanay kuwo dowladnimada jecel.
"Anaga waxaan jooggaa Degmada Buulo Barde, Madaxweynahana waa jooggaa. Waxaan ku soo wareegnay xaafadaha kala duwan ee degmada, dadkana aad iyo aad ayay noo soo dhaweeyeen, taasi waxay ku tusinaysaa sida ay dadka dowladnimada u jecel yihiin." Ayuu yiri Wasiir Kuxigeenka.
Dhanka kale waxaa uu dadka reer Buulo Barde ugu yeeray inay ka fogaadaan in siyaasiyiin ka maqan Degmada Buulo Barde ay ku qanciyaan inay qabtaan bannaanbaxyo ka dhan ah Hirshabelle.
"Waxaan rabaa inaan wax yar ka iraahdo, dadka deegaanka waxaan leenahay iska ilaaliya in la'idinku qanciyo bannaanbaxyo aad dhigtaan, wixii dhaliil ah maamulka waa loo soo jeedin karaa, laakiin in la yiraahdo siyaasi hebel oo magaalo heblo joogga ayaa na soo wacay, naguna yiri bannaanbaxyo sameeya, taas lama rabo." Ayuu yiri Geelle Isaaq Warsame.
Warsame ayaa intaa ku daray "Dadka waa inay iska ilaaliyaan bannaanbaxyada, waana in la helaa cid damaanad qaadda amniga iyo taayeerada la gubaayo."
Kan-xigaCiidamada Booliska oo tiro dhalinyaro...
Kan-horeDowladda oo ciidamo badan soo dhoobta...
54,598,918 unique visits